နက်ရှိုင်းသော V-Neck သတင်းစာအက္ခရာများကိုအမျိုးသမီးများအတွက်ပုံနှိပ်ပါ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိပါ WoopShop®
နက်ရှိုင်းသော V-Neck သတင်းစာပေးစာအမျိုးသမီးများ၏ကောက်ပဲသီးနှံများအပေါ်ထိပ်ဆုံးသို့
$23.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $39.99
အရောင် V လည်ပင်းရှပ်အင်္ကျီ အိုလည်ပင်းရှပ်အင်္ကျီ
အရွယ် S L M
V လည်ပင်းရှပ်အင်္ကျီ / S V လည်ပင်းရှပ်အင်္ကျီ / L ကို V လည်ပင်းရှပ်အင်္ကျီ / M က အိုလည်ပင်းရှပ်အင်္ကျီ / L O လည်ပင်းရှပ်အင်္ကျီ / S အိုလည်ပင်းရှပ်အင်္ကျီ / M
နက်ရှိုင်းသော V-Neck သတင်းစာပေးစာအမျိုးသမီးအမျိုးသမီးသီးနှံထိပ် - V လည်ပင်းရှပ်အင်္ကျီ / S backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ရာသီ - နွေ ဦး ရာသီ / ဆောင်း ဦး ရာသီ
လိင် - အမျိုးသမီးများ၊
အသွင်အပြင် - ကိုရီးယားစတိုင် Harajuku Halterneck အမျိုးသမီး ၀ တ်တီရှပ်လက်ရှည်
ဘလောက်စ်အင်္ကျီနှစ်ထပ်ကိုမှာယူခဲ့တယ်။ အရွယ်အစားနဲ့အတူအမှားမလုပ်မိဖို့ငါကြောက်ခဲ့တယ်။ ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အတူ S ကိုအမိန့်နှင့်တံခါးပိတ်ရင်ဘတ်နှင့်အတူအမ်နှစ် ဦး စလုံးperfectlyုံထိုင်တော်မူ၏။ အဆိုပါ cutout ပစ္စည်းနှင့်အတူပိုပြီးဆန့်သောတ ဦး တည်းအပေါ်။ ရင်ဘတ်သည် ၉၀ စင်တီမီတာ၊ ခါး ၆၀ နှင့် S နှင့် M အရွယ်အစားသည်ကောင်းမွန်သည်။ M ကပိုကြာကြာ။ အရည်အသွေးအံ့သြဖွယ်အံ့သြသွားတယ်။ ၎င်းသည်စျေးကြီးပြီးစတိုင်ကျလှသည့်အပြင်ကောင်းစွာဆေးကြောနိုင်သည် (အအေးခံခြင်း) ။ ကုန်ပစ္စည်းများမော်စကိုတွင်တစ်ပါတ်အဘို့အလာ! ဒါကြောင့်ငါကလူတိုင်းကအကြံပြု!
အချစ်က ၁၀ ဖြစ်တယ်
ဖောက်သည် 5.0 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကို5/ 72123 ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။